नेयमारको बाछिटा - खेलकुद - नेपाल
उच्च रकमको ट्रान्सफर कारोबारमा राजनीतिक रंग
एफसी बार्सिलोनाबाट १९ साउनमा पेरिस सेन्ट जर्मन (पीएसजी) पुगेका नेयमार डा सिल्भा सान्तोष, २५, को ट्रान्सफरका कारण अहिले फुटबलमा ठूलै खैलाबैला मच्चिएको छ । नेयमारलाई ल्याउन पीएसजीले २२ करोड २० लाख युरो खर्च गर्‍यो । एउटै खेलाडीलाई भित्र्याउनका लागि यत्रो रकम खर्च गरिनुले ठूलै हल्ला मच्चिनु आफँैमा अस्वाभाविक थिएन पनि । किनभने, त्यो २२ करोड २० लाख युरोमा पीएसजीले नेयमारलाई दिने पारिश्रमिक र बोनस जोडिएको छैन । त्यो त पीएसजीले नेयमारको पूर्वक्लब बार्सिलोनालाई तिरेको रकम मात्रै हो ।
नेयमार पीएसजी गएपछि खेलाडीहरूको भाउ पनि अकासिएको छ । अब राम्रा खेलाडी ल्याउन सामान्य क्लबको हैसियतभन्दा माथिको कुरा हुन थालेको छ । सामान्य खेलाडीको मूल्य पनि पाँच करोड युरो नाघिसकेको छ । नेयमारको ट्रान्सफरलाई लिएर विभिन्न क्लबका प्रशिक्षक र अन्य पदाधिकारीले व्यक्त गरेको चिन्ता पनि यसैका लागि हो ।
नेयमारको ट्रान्सफरले फुटबलभन्दा बाहिर पनि तहल्का मच्चाएको छ । अहिले, यस कारोबारमा राजनीतिक संलग्नता रहेको अड्कलबाजी पनि सुरु भएको छ । उनलाई किन्न कतारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन सक्ने अनुमान चलिरहेको छ । हाल कतारले छिमेकी देशहरूको नाकाबन्दी झेलिरहेको छ । सन् २०२२ को फिफा विश्वकप आयोजनाको जिम्मा पाएको कतारलाई त्यसको तयारीमा यो नाकाबन्दीले पक्कै असर पारेको छ । त्यसमाथि रंगशाला निर्माणका क्रममा भएका श्रम शोषणका कारण कतारको चौतर्फी आलोचना पनि भएको छ । कतारले विश्वकप अयोजनाको जिम्मा पाउनु पनि विवादरहित रहेन । यसका लागि कतारले फिफाका पदाधिकारीहरूलाई करोडौँ डलर दिएको पनि खुलासा भएको थियो ।
पीएसजी फ्रान्सको घरेलु लिग खेल्ने क्लब हो । नेयमार पीएसजीमा आबद्ध हुँदा त्यसमा कतार कसरी जोडिन पुग्यो त ? पीएसजीको स्वामित्व कतार इन्भेस्टमेन्ट अथोरिटीसँग छ । जसले कतारको पैसा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ । एकातिर नाकाबन्दीको मार र अर्कोतर्फ विश्वकपलाई लिएर भएका विवादबाट माथि उठ्न कतार राम्रो मौकाको पर्खाइमा थियो । पीएसजीले नेयमार किन्नु सायद कतारका लागि त्यस्तै मौका हुन सक्छ । किनभने, आफ्नै स्वामित्वको क्लबमा रहेपछि नेयमारलाई २०२२ को विश्वकपको प्रचार गर्न सजिलो हुन्छ ।
नेयमार असाधारण प्रतिभा भएका खेलाडी हुन् । उनी आएपछि पीएसजीका समर्थकहरूको संख्या ह्वात्तै बढ्न सक्छ । त्यसमाथि च्याम्पियन्स लिगमा उपाधिका लागि लड्न नेयमार पीएसजीको मुख्य हतियार बन्नेछन् । घरेलु प्रतियोगिता र च्याम्पियन्स लिगमा जति राम्रो गर्‍यो, क्लबको अर्थतन्त्र पनि उति नै मजबुत बन्दै जान्छ । मैदानभित्र नेयमारले राम्रो गरे क्लबलाई मैदानबाहिर हुने फाइदा यो पनि हो । नेयमारलाई पीएसजीका खेलाडीका रूपमा पहिलोपटक प्रस्तुत गर्दा क्लबका अध्यक्ष नासिर अल खेलाइफीले पनि यो कुराको संकेत गरेका थिए । उनले भनेका छन्, ‘नेयमार आउनुअघि हाम्रो क्लबको मूल्य १० अर्ब डलर थियो, अब १५ अर्ब पुग्यो । केही वर्षमा यो कम्तीमा दोब्बर हुनेछ ।’
पीएसजीको मूल्य जति बढ्यो, कतारलाई झनै फाइदा हुन्छ । आखिर लगानी कतारकै हो । जब पीएसजीमै कतारको लगानी छ भने खेलाडी किन्न कतारले लगानी गरेको भए पनि यसको विरोध किन भयो त ? युरोपमा फुटबलको नियमनकारी संस्था यूईएफएले युरोपेली क्लबहरूले खेलाडी किन्नका लागि आफ्नो वार्षिक नाफाभन्दा मात्र एक करोड युरो बढी खर्च गर्न सक्ने नीति लागू गरेको छ, जसलाई फाइनान्सियल फेयर प्ले (एफएफपी) भनिन्छ । अन्धाधुन्ध खर्चका कारण व्यावसायिक फुटबल क्लबहरू टाट पल्टिने सम्भावना नआओस् भनेर यो नियम ल्याइएको हो, जसलाई युरोपियन युनियनले पनि समर्थन गरेको छ । यस अर्थमा हरेक क्लबले खेलाडी किन्न आफ्नै स्रोतको आम्दानी खर्च गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताका अन्य स्रोतका आम्दानीले खेलाडी किन्न पाइँदैन । एफएफपी पालना नगरेकै कारण पीएसजी सन् २०१४ मा एकपटक कारबाहीमा परेको थियो ।
नेयमार अहिले पीएसजीका खेलाडी भइसके । तर, पीएसजीबाट खेल्न उनले अझै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । किनभने, उनको ट्रान्सफर सर्टिफिकेट अझै आएको छैन । जुन उनको पूर्वक्लब बार्सिलोनाले खेल्ने घरेलु लिग ला लिगाले दिनुपर्छ । उनी स्पेन छाडेर फ्रान्सको क्लबमा आबद्ध हुँदा स्पेनको फुटबल र अर्थतन्त्र दुवैलाई घाटा लाग्छ । यही कारण पनि उनलाई ट्रान्सफर सर्टिफिकेट दिन एफएफपीको अड्को थापिएको छ । ला लिगाका अध्यक्ष जाभियर टेबासले पीएसजीले एफएफपी मिचेको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार त्यत्रो रकम खर्च गर्न सक्ने ल्याकत भएका क्लब दुई–तीनवटा मात्रै छन्, जसमध्ये स्पेनको बार्सिलोना र रियल म्याड्रिड पर्छन् । पीएसजीले झूटो विवरण दिएर बढी आम्दानी देखाएको छ । यस मामिलामा अनुसन्धानका लागि बार्सिलोना र ला लिगाले युनियन अफ युरोपियन फुटबल एसोसियसन (यूईएफए)लाई पनि गुहारेका छन् ।
फ्रान्सको घरेलु लिग लिग वानले नेयमारको ट्रान्सफर पारदर्शी भएको र ला लिगाले अनावश्यक बखेडा झिकेको आरोप लगाएको छ ।
अब फ्रान्सको लिग वानमा नेयमार खेल्ने भएपछि फ्रान्सेली फुटबलका अधिकारी पनि खुसी छन् । उनीजस्तो उच्चकोटिको खेलाडीका कारण फ्रान्सको घरेलु लिगको स्तर बढ्ने उनीहरूको आशा छ । अर्कोतिर, मेसी र रोनाल्डोकै हाराहारीमा आम्दानी गर्ने नेयमारले फ्रान्समा आयकर तिर्ने छन् । यो उनीहरूका लागि अर्को खुसीको कुरा हो । त्यसकारण फ्रान्सका राष्ट्रपति र अर्थमन्त्री पनि नेयमार फ्रान्स आऊन् भन्ने चाहन्थे ।
हुन त नेयमार आफ्नो इच्छाले पीएसजी गए । तर, उनका लागि जति रकम खर्च भएको छ, त्यसले व्यावसायिक फुटबलमा नराम्रो असर पार्न पनि सक्छ । अघिल्लो वर्ष युभेन्ट्सबाट पल पोग्बा किन्न म्यानचेस्टर युनाइटेडले १० करोड ५० लाख युरो खर्च गर्दा त्यसलाई कतिले आवश्यकताभन्दा बढी रकम भनेका थिए । जुन त्यसबेलाको कीर्तिमानी रकम थियो । यसपटक नेयमारका लागि त त्यसको दोब्बरभन्दा बढी खर्च भएको छ । क्षमताको मूल्यांकन गर्ने हो भने नेयमार यति महँगा खेलाडी हुनु स्वाभाविक मानिएला । तर, धनी क्लबले एउटै खेलाडीका लागि आँखा चिम्लेरै खर्च गर्नु व्यावसायिक फुटबलका लागि राम्रो होइन । किनभने, साना र कम आम्दानी भएका क्लबलाई खेलाडी किन्न गाह्रो हुन्छ । त्यसमाथि आफूसँग भएका राम्रा खेलाडी जोगाउन पनि धौधौ हुनेछ । खेलाडी ट्रान्सफरको महँगी नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएमा पछि पैसा र राम्रा खेलाडी केही निश्चित क्लबसँग मात्रै रहने चिन्ता पनि बढेको छ ।